Afar gabdhood oo walaalo ah, hal mar caloosha kasoo baxay, mar qurana wada aqal galaya - BBC News Somali
17 Febraayo 2020
Xigashada Sawirka, Uthara
The sisters say most of their time is now devoted to wedding planning
Afarta gabdhood ee walaalaha ah, oo kasoo jeeda gobolka Kerala ee koonfurta Hindiya, waxay hooyadood dhashay hal maalin, noloshooda oo dhanna waxay kusoo qaateen qaab isku mid ah - iyagoo hal nooc oo raashin ah cunaya, hal nooc oo dhar ahna wada xiranaya - iyo xitaa iyagoo hal kursi uga fariisanayay fasalka iskuulka, ilaa inta ay ka gaarayeen 15 sano.
"Waxa ugu badan ee hadda gurigeenna looga sheekeysto waa arooska. Wali ma aannaan soo gadanin dharka aan ugu talagaleyno maalinteenna weyn. Laakiin waxaan soo iibsan doonnaa hal nooc iyo hal midab oo isku wada mid ah", ayey tiri Uthara.
Dabaaldagga maalinta dhalashada waxaa la isticmaalaa doolshooyin badan
Afarta walaalo waxay badanaa xirtaan dhar isku nooc ah
"Hooyadeen ayaa jecel in halmaalin aan wada aqal galno. Sidaas darteed, waan go'aansannay inaan isa sugno," Uthraja ayaa sidaas ku tiri BBC.
Uthrajan wuxuu sheegay inuusan wali guur qorsheysanin
Marka laga soo tago afarta gabdhood iyo arooskooda, wiilka ay isku mar caloosha iskala soo baxeen ee lagu magacaabo Uthrajan wuxuu sheegay in isagu uusan wali go'aan ka gaarin inuu guursado.
Rema Devi waxay sheegtay in carruurteeda uu miisaankooda aad u hooseeyay markii ay dhasheen
"Waxay dhasheen iyagoo miisaankooda uu aad u hooseeyo, inta badanna way xanuunsan jireen," ayey tiri Rema Devi, oo dib u xasuusaneysay sida ay carruurteeda kusoo koreen.
In la koriyo shan carruur ah uma sahlaneyn hooyo Rema Devi
"Waligeen dhibaato dhexdeenna ma imaanin. Waligeen ma aannaan dhibsanin in midba midda kale ay dharkeeda xirato", ayey tiri Uthara.
Rema Devi, iyo seygeeda oo dhintay waxay dhibaato kala kulmeen korinta carruurtooda
"axaan diiradda saaray korinta carruurteyda. Shaqadeyda waxay ku filnaatay kharashka raashinka iyo waxbarashada".
Gabdhaha aabahood, Prema Kumar, oo ka caawinaya Uthara inay baaskiil waddo
"Nolosha adag waxay dadka ka dhigtaa kuwo meel fiican iska soo saara", ayey tiri Rema Devi.
"Hooyadeen aad bay u faraxsan tahay. Waxay mar walba dooneysay inaan noqonno dad madax banaan", ayey tiri Uthara.
Gabdhaha walaalaha ah waxay sheegeen inay iska fikiri doonaan xitaa arooskooda kaddib
"In isha nalagu wada hayo waa barako", ayey tiri Uthara.
"Xitaa markii aan kala aadno meelo kala duwan oo aan ku noolaaneyno, mar walba waxaan isula jiri doonnaa si niyad ah, waana iska fikiri doonnaa", ayey tiri Uthara.